सम्पादकीय बुधबार, जेठ १५, २०७६ मा प्रकाशित
आज १२औं गणतन्त्र दिवस । २०६५ जेठ १५ का दिन संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनको सम्झना ! त्यसैले संवैधानिक वा स्वेच्छाचारी जुन प्रकारको भए पनि राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याउन सबैखाले जन आन्दोलन र जनयुद्धमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूमा हार्दिक नमन ! भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ! बेपत्ता बनाइएका योद्धाहरूको परिवारजनमा गहिरो सहानुभूति ! घाइते योद्धाहरूमा हार्दिक सम्मान !
मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको अवसरमा आज बुधबार १२ औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंश राज परम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
निश्चित रूपमा सबैखाले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापना इतिहासको अग्रगामी विजय हो । तर हामीले संघीयता र लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं । यदि यी दुई अवयवहरू कमजोर हुने हो भने गणतन्त्र पनि कमजोर हुनु निश्चित छ । किनभने हिटलर पनि गणतन्त्रबाटै पलाएका थिए । यहाँ पनि संघीयतामाथि संगठित-असंगठित, भौतिक-मानसिक, सांस्कृतिक-सामाजिक रूपले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रहार भइरहेकै छ । लोकतन्त्रलाई कुलीनतन्त्रको रूपमा फेर्ने कसरतमा पनि एउटा संभ्रान्त तप्का लागेकै छ ।
गणतन्त्र दिवसको दिन दिइने सार्वजनिक विदा भने सरकारले गत वर्षबाट कटौती गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिने कार्यबाहेक यो दिनलाई सम्झने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको आहुती दिनेहरुप्रति सम्मान गर्ने काममा राज्यको बागडोर सम्हालेर बसेको नेतृत्व चुकिरहेका छन् । ज्यानको बाजि लगायर आन्दोलनमा होमिएकाहरुको पीडा जस्ताको तस्तै छ । नेता र पहुँचवालाहरुको लागि मात्रै फाइदा पुगीरहेको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो रुपमा छ । हत्या हिंसा र अपराधको घटनाहरु दिनानुदिन बढिरहेका छन् । जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।
सरकारले यो दिनमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा औपचारिक समारोह आयोजना गरेर मनाउने गरेकाे छ । त्यस कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागीता रहने गरेको छ । सात दशकदेखिको राजनीतिक लडाईं, अस्थिरता तथा अन्योल सदाका लागि अन्त्य हुने र शान्ति र समृद्धिको युग शुरु हुने आशासहित नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष, तयाग र बलिदानपछि लोकतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष भइसकेको छ ।
दश वर्षसम्म जनयुद्ध सञ्चालन गर्दै आएका माओवादीलाई हतियार त्यागेर शान्तिपूर्ण ढंगले राजनीतिको मुलधारमा आउन लोकतन्त्रका लागि भएको दोस्रो जनआन्दोलन बलियो आधार बन्यो । त्यस्तै, नेपालबाट निरंकुशता तथा राजतन्त्रको सदाका लागि अन्त्यको निर्णायक आन्दोलन थियो- दोस्रो जनआन्दोलन । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । यसकै बलमा विघठित संसदको पुनर्स्थापना भयो । संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभाबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो । संविधान सभाबाटै नेपालको संविधान जारी भयो ।
यो १३ वर्षको अवधिमा थुप्रै घटना, परिघटना भइसकेका छन् । थुप्रै अवरोध, चुनौति, आशंका, अन्योल, घातप्रतिघातका परिघटना भए । नेपाली समाजमा चर्को विभाजनको अवस्था देखापर्‍यो । खासगरी प्रदेशको संख्या, सिमांकन र नामाकंनको सवालमा नेपाली समाजमा निकै पीडादायक घटना समेत भए । एकअर्काप्रतिको अविश्वासको अवस्था बन्यो । तर, यी तमाम आशंका, घातप्रतिघात, अन्योल, द्वन्द्वलाई चिर्दै अन्ततः संविधान जारी भयो । लोकतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष पुगेको छ । लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ । तर, अहिले पनि प्रमुख सवाल भनेको आम नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएकी पाएनन् भन्ने नै हो ।
अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघमा एउटै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत छ । यसको सोझो अर्थ भनेको सरकारहरुलाई राष्ट्र र नागरिकको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नका लागि कुनै पनि किसिमको रोकावट छैन । तर, बिडम्बना आम नेपाली जनताले अहिलेसम्म पनि लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जतिसुकै उन्नत अथवा उत्कृष्ट राज्य प्रणाली लागू गरिए पनि जबसम्म आम नागरिकले विगतको भन्दा आफ्नो जीवन सहज भएको तथा आफ्नो जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको अनुभूति गर्न नपाएसम्म कुनै अर्थ हुदैन । दुर्भाग्यले स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा एउटै पार्टीको दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहेको भए पनि आम नेपाली जनताले न त मुलुकमा सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन्, न मुलुक द्रुत गतिमा समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढेको महसुस नै गर्न पाएका छन् ।
शान्ति सुरक्षा, जवाफदेहिता तथा कानूनी शासनको अवस्था कस्तो छ ? भनेर सामान्य नागरिकले पनि नौ महिना अघि बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका हत्यारालाई अहिलेसम्म पनि सरकारले पक्राउ गर्न नसकेको एउटै घटनाले पनि आंकलन गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको आम नागरिकले विधिको शासन, समृद्धि, सुशासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता तथा पारदर्शी शासनको भरपर्दो ढंगले अनुभूति गर्न पाउनु हो । दुर्भाग्यले अहिलेसम्म आम नेपाली जनताले यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
यिनै परिस्थितिको प्रत्युत्पादनको रूपमा धर्मनिरपेक्षतामाथि धावा बोल्दै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने सपनाका साथ केही कुतत्त्वहरू टाउको उठाउने कोशिसमा लागेकै छन् । यसको मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा श्रम–संस्कृतिप्रतिको दृष्टिकोणमा रूपान्तरणको प्रयास मूर्त नदेखिनु नै हो । त्यसैले संघीयता र लोकतन्त्रको दिशामा संवैधानिक र संस्थागत गर्न बाँकी रहेका वाचाहरू पूरा गर्दै अघि बढ्ने प्रण गर्दै मन–वचन-कर्मणाले त्यस दिशामा लागिपरौं ।